१० नेपाली अभिनेत्री, कसका बुवाआमा के गर्छन् ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
१९ पुष,२०७३ | Forseenetwork
सिनेमा क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ मेन्टेन भएर बस्नको लागि आर्थिक रुपमा बलियो हुनुपर्छ । यहि कारण पनि होला यो क्षेत्रमा धेरै जसो सम्पन्न परिवारबाटै आएको देखिन्छ । सिनेमाकी सफल अभिनेत्री प्रियंका कार्की खानदानी नायिकाको रुपमा परिचित छिन् । अर्कि अभिनेत्री पूजा शर्मा धनी बाउकी एक्ली छोरी भनेर चिनिएकी छिन् । यहि प्रसंगमा आज हामीले १० नेपाली अभिनेत्रीका बुवा आमा के गर्छन् ? त्यस बारेमा एक सामाग्री तयार पारेका छौँ ।
अभिनेत्री संचिता लुईँटेलका पिता बिद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत थिए । हाल भने अवकास प्राप्त गरेर बसेका छन् । त्यस्तै उनकी आमा पनि सरकारी जागिरबाट अवकास प्राप्त नै हुन् । उनकी आमा नेपाल टेलिकममा कार्यरत थिईन् । आमा बुवाले नै यहि बर्ष स्वेच्छाले अवकास लिएर बसेको संचिताले हामीलाई बताईन् ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीकी आमा पहिलो हेयरहोस्टेज थिईन् । हाल भने उनी गृहणीकै रुपमा घरमा छिन् । त्यस्तै प्रियंकाका बुवा भने व्यापारी हुन् । त्यसो त प्रियंका मल्होत्रा खानदानकी भान्जी हुन् । उनको परिवार पनि आर्थिक रुपमा अरुको तूलनामा बलियो छ । त्यस कारण उनी खानदानी नायिकाको रुपमा पनि परिचित छिन् ।
पूजा शर्माका बुवा सिन्धुपाल्चोकको चौतारास्थित स्थानिय अस्पतालमा चिकित्सकको रुपमा कार्यरत छन् । उनकी आमाले केही समय अघिसम्म शिक्षिकाको रुपमा काम गर्थिन् । पछि भने केहि समस्या आएका कारण शिक्षिकाको पेशा छाडेर घरमै बस्न थालेकी छिन् ।
अभिनेत्री केकी अधिकारीका बुवा निर्देशक हुन् यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । सुरुमा नेपाल टेलिभिजनमा काम गरेका बद्री अधिकारीले पछि गएर केही सिनेमा निर्देशन पनि गरे । तर उनको सिनेमा निर्देशनको यात्रा खासै सफल भएन । हाल उनी नाँचघरमा महर्षी यज्ञ बल्क्य नामको नाटक गरिरहेका छन् । उनी यो नाटकको निर्देशकको रुपमा छन् । केहि समय अघि केकीका बुवाको आफ्नै स्कूल पनि थियो । तर आर्थिक अवस्थाले सताएका कारण उनीहरुले स्कूललाई अगाडि लैजान सकेनन् । केकीकी आमा भने हाउसवाईफ हुन् ।
सिनेमा नाई नभन्नु ल ४, छक्का पञ्जा, जात्राबाट दर्शकको मन जितेकी अभिनेत्री बर्षा राउतका बुवा व्यापारी हुन् । त्यस्तै उनकी आमा भने घर सम्हालेर कसेकी छिन् । बर्षा आफ्नी आमाको कामलाई निकै नै गाह्रो काम भन्छिन् । घर सम्हाल्नु भनेको ठूलो काम हो भन्दै उनले आफ्नी आमाले सबैभन्दा गाह्रो काम गर्ने केही समय अघि हामीलाई बताएकी थिईन् ।
मेनुका प्रधान थियटर हुन्दै सिनेमामा आएकी अभिनेत्री हुन् । उनले सिनेमा टलकजंग भर्सेस टुल्के र भैरवमा आईटम गीत पनि गरिन् जसले उनलाई चर्चामा ल्यायो । त्यस्तै उनले रेशम फिलिलि, गाजलु, पूरानो डुङगा लगायतका सिनेमामा काम गरेकी छिन् । मेनुकाको जन्म भारतमा भएको हो । उनका बुवा भारतीय सेनामा कार्यरत भएका कारण उनी भारतमै जन्मेकी हुन् । । भारतको मनिपूरमा कार्यरत उनका बुवाले मनिपूरकै युवतीलाई श्रीमती बनाएर भित्र्याएका थिए । मेनुकाकी आमा हाउसवाईफ हुन् भने बुवा अवकास प्राप्त गरेर कान्छी श्रीमती (मेनुकाकी सौताने आमा)सँग बस्दै आएका छन् ।
बेनीशा हमाल अहिले सिनेमा किङ्गका कारण चर्चामा छिन् । एक्शन नायक निखिलसँग पहिलो पटक पर्दा बाँडेकी बेनिशा यो सिनेमाले आफ्नो करिअरलाई माथि लैजानेमा विश्वस्त छिन् । बेनिशाका बुवा व्यवसायमा संलग्न छन् । बेनिशा जन्मने समयमा कानुन विषयमा अध्ययन गर्दै गरेका उनका बुवा अहिले भने चितवनमा पोल्ट्री फार्र्म चलाएर बसेका छन् । बेनिसाकी आमा सामाजिक कार्यकर्ता हुन् ।
अभिनेत्री शिल्पा पोख्रेलका पिता ओम राज पोख्रेल व्यापारी हुन् । विराटनगरमा राज केमिकल उद्योगका नामले फिनाईल, ईंक लगायतका सामानहरु सप्लाई गर्दै आएका छन् । यो उनीहरुको पुर्ख्यौली व्यापार हो । शिल्पाका हजुरबुवाको यो ब्यापारलाई बुवाले निरन्तरता दिईरहेका छन् । त्यस्तै शिल्पाकी आमा सुचिता भने शिक्षिका हुन् । सुचिता प्राथमिक स्तरका बिद्यार्थीहरुलाई बिगत पाँच बर्ष यता पढाउँदै आएकी छिन् । यो भन्दा पहिले भने उनी पनि पतिसँगै व्यापारमा संलग्न थिईन् ।
सानै उमेरमा राम्रो स्टारडम पाएकी अभिनेत्रीको रुपमा स्वस्तीमालाई चिनिन्छ । सिनेमा होस्टेल रिटन्र्सबाट ब्रेक लिएकी स्वस्तीमा अहिले दोस्रो सिनेमा लभ लभ लभको प्रमोशनमा जुटेकी छिन् । स्वस्तीमा आर्र्मी ब्याकग्राउण्डकी हुन् । उनका बुवा नेपाली सेनामा कार्यरत थिए । हाल भने अवकास प्राप्त भईसकेका छन् । त्यस्तै उनकी आमा हाउसवाईफ हुन् ।
बोल्ड अभिनेत्री सुरविना कार्कीका बुवा राजनेता हुन् । उनी अहिले नेपाली कंग्रेसमा कार्यरत छन् । त्यस्तै उनकी आमा पहिले शिक्षिका थिईन् । हाल भने अवकास प्राप्त भएर ब्यापारमा संलग्न छिन् । सुरवीनाले सिनेमाकी हट अभिनेत्रीको परिचय बनाएकी छिन् । उनले लुकामारी, झेली, शुस्त्री, नाईके लगायतका सिनेमामा काम गरेकी छिन् ।
छक्का पन्जा२ कै लागि एक महिना अगाडी देखि चुरोट खान सिके : बर्षा राउत
Gufgaf / छक्का पन्जा२ कै लागि एक महिना अगाडी देखि चुरोट खान सिके : बर्षा राउत - –“नाई न भन्नु ल–४” बाट चर्चामाआएकीअभिनेत्री हुन् वर्षा ..